Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- अन्तर्वार्ता
मधेशी जनताको पनि मुड कस्तो देखिन्छ भने अब जसले भारी बोक्नै सक्दैन, जो कमजोर छ, त्यसको टाउकोमा यो अधिकारको भारी बोकाएर के गर्ने ? भनेपछि यिनीहरु केही गर्नै सक्दैन, अधिकारको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनै सक्दैन, यिनीहरु बेइमान हुन्, यस्तो स्थितिमा हामीलाई मुखिया चाहिएको छ ।
मधेशीहरू सत्तामा गएपछि २०७० को चुनावमा धेरै नराम्रो अवस्था आयो । अहिलेसम्म पनि मधेशी दलहरू सत्तामै छन् । सत्ताको उपभोग गरिरहँदा यो चुनावमा पनि नराम्रो अवस्था नै आउने म देख्छु ।
हथकडी लगाउनका लागि त्यस किसिमको अनियमितता, भ्रष्टाचार, गलत कामहरू गरेको प्रमाणित गर्नुप¥यो । त्यो प्रमाणित गर्ने क्षमता उहाँहरूमा छैन । राजेशमान सिंहले मेरो विषयमा अलि बढी बोल्नुभएको छ । त्यस्तो नबोलेर हिंडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । बरू वीरगन्जको विकासमा केन्द्रित भएको भए उहाँलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो ।
स्वाभाविक हो । हिजो र आजका एमालेमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । हिजोको केपी ओली र आजको केपीमा धेरै परिवर्तन भएको छ । आजको दिनमा केपी ओली प्रति जुन झुकाव छ, यदि यस्तै रहिरह्यो भने हामी मात्र होइन, मधेशका अन्य युवाहरू पनि सोच्न बाध्य हुन्छन् ।
यदि पार्टी हाम्रो कामको मूल्यांकन गरेन भने के गर्ने त ? एमालेले हाम्रो आम समुदायको भावनाको कदर गर्छ भन्ने विश्वास छ । अहिले एमालेप्रति मधेशमा विश्वास बढ्दै गएको छ । हाम्रा आम समुदायले पनि एमाले नै प्रवेश गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझावहरू पनि आयो । त्यसकारणले आम समुदाय र जनभावनाको कदर गर्दै एमाले प्रवेश गरेको हुँ ।
पार्टी नयाँ हो, हामी नयाँ होइनौं । हामी धेरै पूराना छौं । नेपालको हरेक राजनीतिक संघर्षमा हाम्रो उत्तिकै भूमिका छ । सम्भवतः अन्य नेताभन्दा अलि बढी नै भूमिका होला । नेपालको भ्रष्टाचार विरोधको आन्दोलनमा हामीजतिको सशक्तरूपले कोही पनि प्रस्तुत भएको छैन । म स्वयं पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर अथवा लेखा समितिमा रहेर वा जुन मन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी पाएँ, त्यो मन्त्रालयको स्वच्छता, त्यहाँको पारदर्शिता अहिले पनि उदाहरणीय नै छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जहिले पनि सुमधुर र अलौकिक रहँदै आएको छ । किनभने यो सम्बन्ध सरकार टु सरकार मात्रै नरहेर जनस्तरको पनि छ । विश्वमै कहीं नभएको सम्बन्ध नेपाल र भारतबीच छ ।
दुनियाँमा कुनै पनि यस्तो राष्ट्र छैन जसलाई चीनले ठगेको छैन । धेरै नै टेक्निकल देशको नाम हो चीन । चीनले सित्तैमा हावा पनि दिनेवाला छैन । पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तानलगायतका देशहरूको अवस्था हेर्नुस्, दरिद्र मुलुक बनाइदिएको छ चीनले । एमसीसीका विरोधमा चीनले उदण्डता नै मचाएको थियो ।
क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूले मान्यता र सम्मान पाउनुपर्छ : अध्यक्ष लाल
तमलोपा मधेश आन्दोलनको राजनीतिक शक्तिको रुपमा आन्दोलनकारी नेतृत्वलाई नै अगाडि बढाउँछ । तमलोपाले देश र मधेशमा नै संस्थागतरुपले संगठित राजनीतिक पार्टी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चुनौतीपूर्ण अभियानलाई बोकेको छ ।
मधेशमा क्षेत्रीय पार्टीको रुपमा तमलोपा स्थापित होस् र काठमाडौंमा पनि आफ्नो हिस्सेदारी लेओस् । त्यसैले हामीले ठूला पार्टीहरुको पछाडि लाग्ने पक्षमा छैनौं । हामी एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व सहितको क्षेत्रीय पार्टीको रुपमा स्थापित हुन चाहन्छौं ।
गिरोहरूले मधेशको अधिकारलाई संस्थागत गर्न सक्दैन : अधिवक्ता विकास ठाकुर
असल सुशासनबाट मधेशको एउटा नेतृत्व आओस् जसले एउटा व्यवस्थित मधेशको परिकल्पना गरोस् भन्ने कुनै दल छैन । अहिले जति पनि मधेशमा दलहरु छन्, यिनीहरु मधेशको नाउँमा भावनालाई व्यापारीकरण गर्नुको अलावा अरु केही पनि गर्न सक्दैन ।
“राजनीतिमा नैतिकता हराएपछि चरित्रको कुनै अर्थ रहँदैन”
राजनीतिक एजेण्डा, आधार क्षेत्र, कसको विरुद्धमा तपाइँ संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ यी सबै कुराहरुलाई हामीले हेर्नुपर्छ । सँगसँगै हाम्रा राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई कसले न्याय गर्न सक्छ । विगत १४ वर्षको अनुभवले हामीलाई के सिकाएको छ भने बारम्बार मधेशकेन्द्रित दलहरु पूराना दलहरुसँग सत्ता गठबन्धनमा गयौं तर कुनै दलले हाम्रो एजेण्डाको हिसावले एकदमै अंकमाल गरेर स्वागत गरेको अवस्था रहेन ।
“लोसपा पनि प्रतिगमनकारी हो, चुनावी तालमेल हुँदैन”
स्थानीयस्तरमा हुन सक्छ तर केन्द्रीयस्तरमै नेकपा (एमाले) र लोसपासँग तत्काल ती प्रतिगामी शक्तिहरुसँग गठबन्धनको सम्भावना छैन । लोसपा पनि प्रतिगामी पार्टी हो । १८ दिनका लागि मन्त्री बन्न गए, ओलीको होस्टेमा हैसे मिलाउन गए । यो निर्वाचनमा केन्द्रीयस्तरमा लोसपासँग सहकार्य हुने छाँटकाँट मैले देखेको छैन ।
रामनगर गाउँपालिका अध्यक्षमा मेरो दाबेदारी रहन्छ : मनिष मिश्र
म अहिलेसम्म कुनै पदमा पुगेको छैन तर पालिकाकालागि विगत पाँच वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु । त्यहाँका जनताले भनिरहेका छन् कि जति काम यो पालिकाका अध्यक्षले गर्न सकेको छैन, त्योभन्दा बढी काम मनिष मिश्रले गरेर देखाइ दिएका छन् । किनभने मभित्र केही गर्ने चाहना छ, पैसा र पदका लागि मात्रै म राजनीतिमा आएको होइन । राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य हो ।
‘साना दलले निर्वाचन चिन्ह नपाए निर्वाचनै हुन दिँदैनौं’
चुनावन जिकिँदै गएको छ, अब हामी सशक्त रुपमा आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँछौं । हामी केन्द्रदेखि जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन गर्छौं । हामीलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह दिनै पर्छ । यदि चुनाव चिन्ह दिइएन भने हामी चुनाव हुन्न दिन्नौं । यो निश्चित छ । हामीलाई बाइकट गरेर यिनीहरुले चुनाव गराउन सम्भव छैन ।
दुई–तीन दलीय व्यवस्था लागू गर्ने षड्यन्त्र : मो.रिजवान अन्सारी
सबै दलहरू निर्वाचन जस्तो पर्वमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले हामी निर्वाचनको तयारी गरौं कि यसको विरूद्धमा आन्दोलन गरौं भन्नेमा अल्झिरहेको अवस्था छ । हामी पनि उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा लाग्ने वातावरण सरकारले त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हामी दबाब सिर्जना गर्छौं ।
मधेशको पहिचानलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ : सुरेश मण्डल
यदि हामी मधेश आन्दोलनका इमान्दार कार्यकर्ता हौं भने मधेशी शक्तिहरू मिल्नैपर्छ । बाँकी दलहरू हाम्रा यात्राका साथीहरू मात्रै हुन् । तर गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि लोसपा र जसपा मात्रै होइन, बाँकी रहेका साना–साना शक्तिहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । मधेशलाई समग्ररूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि सम्पूर्ण मधेशवादी शक्तिहरू एकजुट हुनैपर्छ ।
लोसपामा लोकतान्त्रिक संस्कारै भएन : वृषेश चन्द्र लाल
जति पनि निर्णय भएका छन्, चार जना शीर्ष नेताहरूले मात्रै गर्नुभएको छ । ती चार शीर्ष नेताहरूले अरूलाई कुनै मूल्यांकन नै नगर्ने व्यवहार देखियो । वार्ड अध्यक्षदेखि राष्ट्रियसभासम्मको टिकट बिक्री भएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । अहिले लोसपामा कस्तो स्थिति छ भने नेताहरूको स्वार्थ कहाँ हुन्छ, त्यसमै केन्द्रित छ । जनता, मधेश, देश, पार्टी, कार्यकर्ताको हितलाई नकारेर नेताहरूलाई केमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा
स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ : वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.यादव
भर्खर हाम्रो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, केन्द्रीय समिति गठन भएको छ । अब हामी प्रदेश, जिल्ला, पालिका हुँदै वडासम्म संगठन विस्तारमा जुट्छौं । अहोरात्र हामी खटिरहेका छौं । निर्वाचनको उम्मेद्वारी दिने समयभन्दा पहिले सकभर हामी सबै तहमा संगठन विस्तार गरिसक्छौं । तर हाम्रो दलको बुझाइ के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ ।
जसपा फुट्ने कुनै आधार नै छैन : प्रकाश अधिकारी
जसपाभित्र कुनै पक्ष वा विपक्ष नै छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको हो र ? जतिबेला पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बसिँदैन नि । हुन सक्छ केही साथीहरुलाई कुनै एजेण्डामा छलफल गरौं भन्ने लागेको होला । आवश्यकताअनुसार बैठक बस्छ र बस्नैपर्छ । अध्यक्षलाई अहिले आवश्यकता महसुस नभएको हुनसक्छ ।
किसानको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्ने रोडम्याप हामीसँग छ : ई.दीपक साह (भिडियोसहित)
जनमत पार्टी भनेको जनताको पार्टी हो । हामी सबै किसानकै छोराछोरी हौं । किसानको दुःख हामीले भोगेकोले समस्या समाधानका लागि हामीले खोजीनीति गरेका छौं । हामीले २०६९ सालमा ‘मधेश स्वराज’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेका थियौं, त्यसमा बीउ र खाद आपूर्ति, बाली क्षतिपूर्ति वा सिंचाइका लागि आन्दोलन गर्नुछ भनेर त्यतिबेलै लेखेका छौं ।
सीके राउतले किसानको खोल ओढेर मधेशमा ताण्डव मचाइरहेका छन् : मधेश प्रदेश अध्यक्ष यादव
सीके राउतका कार्यकर्ताहरू आन्दोलन गर्छ भने उता केपी ओलीजीको युवा संघ पनि साथ दिइरहेको छ । के छ सम्बन्ध वा साँठगाँठ ? सीके राउतजीले भन्नुभयो कि आठ जिल्लाको मधेश प्रदेश कसरी हुन्छ, अनि एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि त्यहीं कुरा कराउन थाले ।
जनताले हामीलाई एकपटक मौका दिनुपर्छ, हामी गरेर देखाउँछौं : चन्दन सिंह
आगामी चुनावमा जनताले उनीहरूलाई राम्रोसँग पाठ सिकाउँछ । अब जनमत पार्टी आउँछ, देश र मधेशको नेतृत्व गर्छ । डा.सीके राउतको पार्टीले वैज्ञानिक कृषिक्रान्ति गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लग्छ । हामी बोलेर मात्रै होइन, गरेर पनि देखाउँछौं ।
समग्र मधेशमा दुई प्रदेशका लागि संघर्ष जारी छ : लक्ष्मण लाल कर्ण
मधेशको नामप्रति हाम्रो पूर्ण सन्तुष्टि छ । मधेश आन्दोलनको माग पनि यही थियो । मधेश आन्दोलनका बेला मधेशका सबै कार्यालयहरू र भित्ता–भित्तामा मधेश सरकार लेखिएको थियो । सबैको चाहना मधेश प्रदेश नै थियो । त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मधेशको पहिचान दिन्छ । मधेशीको जुन चाहना थियो, यो नामले पूरा भएको छ ।
मधेशको लडाइ सामाजिक न्यायको लडाइ हो : देवेन्द्र मिश्र
२०४० सालदेखि नै मधेशले आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि अगाडि बढ्दै आएको छ । त्यति बेला मान्छेले आफूलाई मधेशी भन्न पनि डराउँथे । त्यो बेला मधेशी शब्द नै सम्वेदनशील थियो । राज्यले मधेशी भनेर हेप्ने, काठमाडौंमा मधेशी भनेर हेप्ने तर म मधेशी हुँ भन्न नपाउने, यस्तो किसिमको वातावरणबाट आन्दोलनको सुरूवात भयो । २०४० सालमा हर्कबहादुर गुरूङको प्रतिवेदनको विरोधमा आन्दोलन सुरू भएको हो ।